Acer Chromebook Spin 11, onye mmezi ohuru maka umu akwukwo | Akụkọ akụrụngwa
Acer Chromebook Spin 11, onye ozo maka umu akwukwo
Ruben gallardo | | Laptọọpụ
A Chromebook ohuru ga-ada ulo ahia n’onwa april Nke ahụ bụ mgbe ị nwere ike ime ya Acer Chromebook Spin 11.
Site na ndozi nke Chromebooks na - enweta - komputa ndị a dabere na ChromeOS-, enwere ike ịsị na ha bụ netwọkụ ọhụụ ọhụrụ nke narị afọ XNUMXst. Ruo oge ụfọdụ, ụfọdụ ụdị ndị adịlarị na ahịa nwere ike ijikwa ma wụnye ngwa gam akporo; taa nke bụrịrị ọkọlọtọ na ụdị ọhụụ niile batara n'ahịa. Na Acer Chromebook Spin 11 bụ otu n'ime ha.
Akwụkwọ edetu a nwere ihuenyo diagonal 11,6-inch na mkpebi 1.366 x 768 pixel (HD) ma dakọtara na ntụaka anya - a ga-ere Wacom stylus. Ihuenyo ahụ nwere tiltable ogo 360 ruo mgbe ọ ghọrọ mbadamba nkume. N'ụzọ nke a, yana stylus, enwere ike iji ya dị ka akwụkwọ edetu dijitalụ n'oge ọ bụla.
Ka ọ dịgodị, ruo n'ókè nke ike, ndị Acer Chromebook Spin 11 nwere ike ịhọrọ ihe nhazi atọ: Intel Pentium N4200 quad-core, Intel Celeron N3450 quad-core ma ọ bụ Intel Celeron N3350 dual-core. Ọzọkwa, ebe nchekwa RAM nwere ike ịbụ 8 GB na nchekwa dị n’ime ya 32 ma ọ bụ 64 GB.
N'ihe banyere njikọ, Acer Chromebook ga-enye oghere kaadị microSD; Ugboro abụọ USB-C ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ USB USB 3.0 abụọ na Bluetooth 4.2 na WiFi ac MiMo 2 × 2 njikọ ikuku. Mkpokọta ibu nke Acer Chromebook Spin 11 ga-eru kilogram 1,25 na nnwere onwe ya, dị ka Acer n'onwe ya si kwuo, nwere ike iru elekere iri na-aga n'ihu. Laptọọpụ nwere ike ịbụ nke gị na Eprel a ọnụahịa nke ga-amalite site na euro 379.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Laptọọpụ » Acer Chromebook Spin 11, onye ozo maka umu akwukwo
Ọ bụ ọrụ: a ga-ewepụta Samsung Galaxy S9 na 25 nke February
HomePod: Ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere ọkà okwu ọhụrụ nke Apple